जान्नुहोस् : धरै बेसारको सेवनबाट स्वास्थ्यमा के के बेफाइदा हुन्छ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
जान्नुहोस् : धरै बेसारको सेवनबाट स्वास्थ्यमा के के बेफाइदा हुन्छ?
कोरोनाको माहामारी चुलिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा बेसारको महिमा पनि चुलिएको छ। आयुर्वेदिक चिकित्सामा बेसारलाई ‘प्राकृतिक वरदान’ मानिन्छ।
बेसारमा पाइने ‘करक्युमिन’ नामक तत्वले एन्टिइन्फ्लेमेटोरी र एन्टिअक्सिडेन्टका रूपमा शरीरमा काम गर्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने तथ्यसँग एलोप्याथिक चिकित्सा पनि सहमत।
वनस्पति विज्ञानको क्षेत्रमा भएका खोज र अनुसन्धानहरूले बेसारका अनगिन्ती औषधीय गुणको पुष्टि पनि दिइसकेका छन्।
प्रत्येक नेपाली भान्सामा यसको प्रयोग दोब्बररतेब्बर प्रतिशतले बढेको छ। तर यसरी मात्रा नमिलाई अत्यधिक रूपमा सेवन गरिएको बेसार ‘हानिकारक’ हुनसक्छ।
सही मात्रामा प्रयोग गर्दा अनगिन्ती फाइदा भएको बेसारले मात्राभन्दा बढी सेवन गर्दा निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा बिरलैमात्र चर्चा हुने गरेको छ।
अत्यधिक बेसार सेवनले निम्त्याउने समस्या र बेफाइदा
रक्तअल्पतारआइरन डेफिसियन्सी अनेमिया
हाम्रो शरीरलाई आवश्यक ‘आइरन’ आन्द्राका कोषिकाहरूले ‘फेरिटिन’का रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छ। बेसारमा पाइने करक्युमिनु तत्व आन्द्रामा गई फेरिक आइरनसँग बाँधिन्छ, जसका कारण फेरिटिनको उत्पादन हुन पाउँदैन। यसरी हामीले जति नै आइरनयुक्त खाना खाए पनि अस्वभाविक रूपमा धेरै बेसार खाइराख्दा आन्द्राका कोषिकाले सो आइरन उपयोग गर्न पाउँदैन अनि रक्त अल्पताले सताउने गरेको पाइन्छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसार शरीरलाई आवश्यकताभन्दा बढी ९दैनिक ८ ग्रामभन्दा बढी० बेसार सेवन गर्दा रक्तस्रावको समस्या देखा पर्न सक्छ।
यसले रगत पातलो बनाउने र ‘ब्लिडिङ टाइम’ बढाउने गर्छ। जसका कारण चोटपटक लागेपछि रगत जम्ने प्रक्रिया सुस्त हुन्छ अनि यसले अत्यधिक रक्तस्राव गराउँछ। यसका साथै शरीरमा सजिलै निलडामहरू बस्ने समस्या पनि देखा पर्न सक्छ।
हालसालै भएका अध्ययनहरुले बेसारमा पाइने ‘करक्युमिन’ले टेस्टोस्टेरोन नामक हर्मोनको सक्रियता बढाउने तथ्य फेला पारेको छ।
प्रजनन् स्वास्थ्यका दुई महत्वपूर्ण हर्मोन, ‘इस्ट्रोजेन’ र ‘टेस्टोस्टेरोन’ सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने देखिएकाले करक्युमिनको प्रयोग मात्रा मिलाएर गर्दा मात्र फाइदा हुने अध्ययनहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
बेसारमा खादाँ कस्ता बिरामीले विशेष ध्यान दिने:
1.पित्तथैलीमा पत्थरी भएका बिरामीले :
2. मिर्गौलामा पत्थरीको जोखिम भएका बिरामीले :
बेसारमा पाइने ‘अक्जालिक एसिड’ शरीरमा पुगेपछि, विभिन्न प्रक्रियाबाट ‘अक्जालेट क्रिस्टल्स’मा परिणत हुन्छ। यस्ता क्रिस्टल्स मिर्गौलामा फिल्टर हुन सक्दैनन् र पत्थरी बनेर समस्या दिने गर्छन्
3. मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीले :
4.एन्टिकोयागुलेन्ट र एन्टिप्लेट्लेट्स्को नियमित सेवन गर्ने बिरामीले:
रगत पातल्याउने औषधि जस्तै एस्पिरिन, हेपारिन, क्लोपिडोग्रेल, ब्रुफेन, नाप्रोक्जेन सेवन गरिरहेका बिरामीले बेसारको प्रयोग विशेष सावधानीका साथ मात्र गर्नुपर्छ। (स्वास्थ्य पत्रिका)
प्रकाशित मिति: Nov 20, 2020
किन रोक्न हुँदैन हाच्छिउँ? जान्नुहोस् कारण र रोचक तथ्य !
हामी सबैलाई सामान्यतया बेलाबेलामा हाच्छिउँ आईनै रहन्छ । तर कुनै अवस्थामा मानिसहरु बिभिन्न कारणले गर्दा
के तपाइलाई जाडोमा पिनासको समस्याले सताउने गर्छ? यसबाट बच्न यी घरेलु विधि अपनाउनुहोस्!
जाडो मौसममा पिनास (साइनस)को समस्याबाट धेरै जना ग्रसित हुने गर्छन् । साइनस संक्रमण एक नाकसँग
जाडोमा कम पानी पिउँदा पनि किन धेरै पिसाब लाग्ने गर्छ ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं लगायत अन्य क्षेत्रमा चिसो बढ्दो क्रममा छ । यस मौसममा न्यानो कपडा लगाएर चिसोबाट
हामीले पटका पड्काउँदा आँखामा चोट लागे के गर्ने?जान्नुहोस् यी ८ सावधानी!
समस्त नेपालीहरुको दास्रो महान चाड दिपावली आइरहेको छ । दिपावलीमा मुख्य गरेर दियो बाल्ने अनि
के तपाईलाई खाना अपचको समस्या छ ? यी ८ घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्!
हाम्रो समाजमा धरै जसो मानिसलाई खाना अपचको समस्या देखिने गर्छ । खाना अपचको समस्या विभिन्न
खोकीले सतायो ? चिन्ता नलिनुस्, अब घरेलु उपायबाटै हुनेछ, निदान !
जाडो मौसममा धेरैलाइ खाेकी लाग्ने समस्याले सताउछ । खोकी लाग्ने बिभिन्न कारण हुन्छन् । कुनै
प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिनियाँ रक्षामन्त्री वेईको बालुवाटारमा भेट, आजै राष्ट्रपतिलाई भेट्ने
नेपाली सेनाद्वारा चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान
जंगीअड्डामा भब्य स्वागतपछि प्रधानमन्त्रीसँग र चिनिया रक्षामन्त्रीबीच शिष्टाचार भेट
पर्वतीय उडानमा यात्रुलाई आकर्षण गर्न एयरलाइन्सबीच कडा प्रतिस्पर्धा
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आधारहिन : सरकार